‘मेरो लडाइँ असल न्यायाधीशविरुद्ध होइन’ : ‘म जेलभित्रै अनशन बस्छु’ « News24 : Premium News Channel
‘मेरो लडाइँ असल न्यायाधीशविरुद्ध होइन’ : ‘म जेलभित्रै अनशन बस्छु’
सर्वोच्चको आदेशलाई कसरी लिनुभएको छ ?
म सर्वोच्च अदालतलाई न्याय दिलाउने संस्थाका रूपमा एकदमै सम्मान गर्छु। संस्थामा सही न्यायसम्पादन गर्ने न्यायाधीशहरूप्रति मेरो मनमा सम्मान भाव छ। तर, मान नै नभएका कतिपय छन्, तिनको केको मानहानि ?
न्यायपालिकाको सर्वोच्चतामाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ ?
सबै न्यायाधीश खराब छैनन्। मैले गरेको लडाइँ असल न्यायसम्पादन गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध हुँदै होइन। यसमा मेरो कुरा प्रस्ट छ। तर, न्यायालयमा बसेर थुपै्र गलत काम भएका उदाहरण छन्। मैले यसबारे वर्षौंदेखिका गल्तीहरूका तथ्य प्रमाण जुटाएको छु। एक नागरिकका रूपमा यसबारे बोल्नु मेरो कर्तव्य हो।
अहिले अनशनचाहिँ किन बस्नुपर्‍यो ?
हामी चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि वर्षौंदेखि लडिरहेका छौं। संविधानले जनतालाई दिएको मौलिक हकका लागि हाम्रो लडाइँ हो। अहिले न्यायालयको काम जनतालाई न्याय दिने किसिमको देखिएन। त्यसैले समस्याको जरोसँगै लड्नुपरेको हो।
अब अगाडि के गर्नुहुन्छ ?
म मेरो प्रतिबद्धताबाट विचलित छैन। न्यायालयभित्रका विकृति विसंगति पनि छानबिनको विषय बन्नुपर्छ। टिचिङ अस्पताल सुधारसम्बन्धी हामीले उठाउँदै आएका मागहरू सम्बोधन हुनुपर्छ।यो खबर आजको अन्नपूर्णपोष्टमा छापिएको छ ।
गिरफ्तारीको अवस्थामा अब तपार्इंको अनशन के हुन्छ ?
मलाई हदै गरे जेल हालिएला। केही छैन, म जेलभित्रै अनशन बस्छु। किनभने म त चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विकृतिमाथि यसअघि नै आमरण अनशन बसिसकेको व्यक्ति। मलाई भोलि के होला भनेर चिन्ता छैन।
(अदालतको अवहेलना अभियोगमा सिंहदरबार प्रहरी वृत्तमा थुनिएका डा. केसीसँग बसन्त बस्नेतको कुराकानी)